Asus Warns Graphics Makadhi Ari Kuda Kuwana Zvakawanda Zvinodhura | Linux Vakapindwa muropa
Asati a2009, mari yemadhora yakanga isati yavapo Uye sezvo tekinoroji yakafambira mberi kuzadzisa kudiwa kwayo kuri kukura, cryptocurrency yekuchera yave chinhu chaicho kune vazhinji pamakomputa avo ega.
Kwemakore, maitiro ekuburitsa uye kushanda kwayo kwave nani nekushandisa kwemidziyo iri nani. Graphics Processing Units (GPUs) ave achishandiswa mune yekuchera chiitiko kwemakore, nekuda kwekuti iwo anonyanya kushanda.
Muboka reFacebook Asus DIY PC, Asus technical marketing maneja, Juan José Guerrero III, akayambira kuti mitengo yezvikamu zvekambani yaizowedzera mukati megore rino.
"Tine chiziviso pamutengo wekushambadzira wemutengo (MSRP) wemutengesi wemakadhi edu emifananidzo nemabhodhi mama," izvo zvichatanga kushanda kutanga kwa2021, uku uchinyevera kuti mamwe mamodheru anogonawo kunge achiwedzera kukwira kwemitengo.
“MSRP yedu nyowani inoratidza kukwira kwemitengo yezvinhu, mashandiro, mashandisirwo ezvekuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwemitengo kubva kunze kwenyika. Takashanda padhuze nevatengi vedu vekutenga nekutenga zvinhu kudzikisa kukwira kwemitengo. "Tinotenda zvikuru kuenderera mberi nekubatana kwavo uye nerutsigiro kukambani panguva ino yekushanduka musika kusati kwamboitika."
Una yezvikonzero zvikuru yekuwedzera uku mumitengo yemakadhi emifananidzo inogona kunge iri boom inoonekwa mukati iyo indasitiri ye cryptocurrency.
Zvechokwadi, kubva kuvambwa kweGeForce RTX 3090 mifananidzo yemakadhi, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT uye Radeon RX 6800, kudiwa kuri kuramba kuchiwedzera uye zvinhu zviri kuramba zvichitengeswa nekukurumidza sezvazvinoitika.
Nemafambiro achangobva kuitika kumusoro muBitcoin neEthereum mitengo, akanakisa emifananidzo makadhi izvozvi anotarisirwa kunyangarika nekukurumidza.
Sechiyeuchidzo, cryptocurrency kuchera kwakasimbisa kudiwa kweGPUs kweakawanda egore rapfuura, kubva kune iyo AMD neNVIDIA vakabatsirwa zvikuru nemamiriro ezvinhu aya.
Nechikamu chayo, Nvidia akavimba muna Nyamavhuvhu kuti cryptocurrency yekuchera yakanga yave injini huru yekukura kwevagadziri veGPU, nepo musika weGPU wakatsaurirwa kuvatambi vakatambura kwemwedzi yakawanda kubva pakushaikwa kwemakadhi emifananidzo uye kuwedzera kwemitengo yerudzi urwu zvinhu nekuda kwekuda kwakanyanya kwechinyakare maGPU mumisika yemigodhi ye cryptocurrency.
Mukuedza kugadzirisa kushomeka uku, NVIDIA yakatobvunza vatengesi kuti varege kutengesa yako GeForce GPUs kune cryptocurrency vacheri. Aya mamiriro akatungamira AMD neNVIDIA kuvhura kushambadzira kwemakadhi emifananidzo matsva akapihwa mashandiro emigodhi.
Uye ndeyekuti GPU-based mining inopa mikana yakawanda pamusoro pekushandiswa kweiyo CPU, semuenzaniso, yakajairwa GPU, senge Radeon HD 5970, yakanyoreswa yekumhanyisa kumhanya kwema 3200 32-bit mirairo, inova nguva 800 kumhanya kwe CPU iyo inongopa chete makumi mana nemakumi matatu nemaviri mirayiridzo. Iyi chivakwa cheGPUs chinoita kuti vakoshe zvakanyanya kumigodhi ye cryptocurrency, sezvo kuita kwemigodhi kuchida kushanda kwakanyanya kuita kudzokorodza kuverenga. Iyo yekuchera chishandiso inoramba ichiedza kusarudza akasiyana mahesheni kasingaperi uyezve, iine imwechete dhijitari ichichinja neyese kuyedza.
MaGPU akaiswawo nenhamba yakakura yezvikamu zvearithmetic zvine musoro (ALUs), ayo anoita basa rekuita masvomhu ekuverenga. Kutenda kune aya maUAL, iyo GPU inogona kuita mamwe masvomhu, ayo anovandudza kushanda kweiyo crypto mugodhi maitiro.
Iko kushanda kweiyo cryptocurrency yekuchera indasitiri rave bhizinesi bhirionari uye anoramba achikura. Makambani anowedzera uye akawanda arikuisa mari muma cryptocurrencies nekuvandudza munzvimbo ino.
Kusiyana nemakore apfuura, makadhi emifananidzo akagadziridzwa zvakanyanya muindasitiri yemavhidhiyo, vanofarira mutambo zvino vachatofanira kubata nevadiki uye nekuvandudza mamwe madhiri ekuwedzera kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Asus anoyambira kuti makadhi emifananidzo ari kuda kuwana anodhura zvakanyanya